Rugta ganacsiga gobolka Sh/dhexe oo agab ugu deeqay isbitaalka dadka dhimirka la’ - Jowhar Somali news Leader
Home News Rugta ganacsiga gobolka Sh/dhexe oo agab ugu deeqay isbitaalka dadka dhimirka la’
Rugta ganacsiga gobolka Sh/dhexe ayaa agab isugu jira sariiro iyo joodariyaal maanta gaarsiisay bukaanada ku jira isbitaalka Dhimirka Bil-Kheyr ee magaalada Jowhar.
Munaasabada wareejinta deeqdan ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka socotay dowlad goboleedka Hirshabelle iyo rugta ganacsiga gobolka Sh/dhexe.
Guddoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Sh/dhexe Ceydiid Maxamed Cabdulle ayaa sheegay in deeqdan aysan ahayn tii ugu horeysay ee ay ganacsatadu dooneyso inay gaarsiiyaan isbtaalka dhimirka ee magaalada Jowhar.
“Deeqdan waa mid deg-deg ah oo aan soo gaarsiinay maanta isbitaalka Bil-Kheyr waana sii wadi doonaa inaan gacan ka geysano sidii dadka dhimirka la’ wax loogu qaban lahaa.”ayuu yiri Ceydiid maxamed cabdulle guddoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Sh/dhexe.
Maamulaha guud ee isbitaalka Bil-kheyr Jimcaale Maxamuud Hilowle ayaa uga mahad celiyay deeqdan rugta ganacsatada gobolka Sh/dhexe.
Wasiir u dowlaha haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Hirshabelle Sacdiyo Maxamed Nuur ayaa sidoo kale umahad celisay ganacsada gobolka gaar ahaan guddoomiyaha rugta ganacsatada dadaalka ay u galeen sidii ay walaalahooda wax ugu qaban lahaayeen.
Ugu dambeyntii waxaa munaasabadan ka hadlay wasiir ku xigeenka ganacsiga iyo warshadaha Hirshabelle Maxamed Yusuf Colow waxana uu sheegay in howshan ay tahay mid wanaagsn waxana uu ugu baaqay shirkadaha ka howlgala gobolka inay ka qeybqaatan sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhimirka la’
Sidoo kale waxaa maanta xariga laga jaray xafiis uu ka furtay rugta ganacsiga gobolka Sh/dhexe bartamaha magaalada Jowhar waxaana uu sheegay guddoomiyaha rugta ganacsatada gobolka Sh/dhexe Ceydiid Maxamed Cabdulle in xafiiskaas loogu adeegi doono guud ahaan ganacsatada gobolka iyo ganacsatada Hirshabelle.
qalab lagu wareejiyay isbitaalka dhimirka jowhar